Ọ nwere na-eme na Islam | Apg29
N'ụzọ dị otú a di ya na-eme. Louisa na Maren adịghị pụrụ iche, na-adịbeghị anya hụrụ a uka ili na 34 isi Kraịst nọ Libya.
Gịnị mere anyị mkpa ịmụta ihe banyere Islam? Interest bụ obere ma ihe mere nwere ọtụtụ ihe mere ndị mmadụ n'ozuzu mkpa ka mma ha ihe ọmụma.
The n'oké size bụ otu ihe, Islam bụ akụkọ ihe mere eme nke abụọ kasị ukwuu na okpukpe mgbe Christianity. Odika 1.6 ijeri mmadụ, n'elu a ise nke ndị bi n'ụwa na-Alakụba, a ọnụ ọgụgụ na-aga n'ihu na-amụba, ọ bụghị n'ihi na ndị onwe ha na-ahọrọ na kwere na anyanwụ ọ bụla na mgbede tent na a apịtị iyi (kor'an 18:84), ma n'ihi na ha amaghị, ihe ize ndụ nke ọnwụ nke ndị chọrọ na-ahapụ, na-amụ udu na Mbugharị.
The ọnụ ọgụgụ nke ndị Alakụba na Sweden na ndị ọzọ na European mba gbawara na-adịbeghị anya na na ọtụtụ ndị mmadụ gburugburu anyị nwere otu si malite, ọ dị mkpa ịmata ihe ha na-anọchi anya.
Amaghi nke ihe Koran na hadith kwuru bụ oké ọbụna n'ime Islam. The ọtụtụ ná ndị Alakụba kwere na Islam bụ naanị eziokwu doro anya, mgbe ahụ, nke a bụ ihe a gwara ha ndụ ha nile. N'otu oge ahụ, ha na-amụta na-na-ajụ ndị Muslim isi mmalite.
The ndị Alakụba na ndị ghọrọ ka Islam mere ihe a ebe ọ bụ na ọtụtụ mgbe e nri na ụgha ozi. Ndị mmadụ na-tọghatara mgbe ha na-amụ Akwụkwọ Nsọ dị nnọọ obere.
"Ọ na-kwesịrị bụghị onye kwesịrị ntụkwasị obi ma ọ bụ nwaanyị nwere okwukwe, mgbe Allah na Ya ozi ikpebi otu ihe, na-enwe free nhọrọ n'okwu a, na onye-enupụrụ Allah na Ya Apostle, na-mkpọrọ pụta ìhè njehie." (Kor'an 33 : 36)
"Onyeozi nke Chineke unu ugbu a natara a ezi ihe nlereanya ya na-enwe olileanya na Allah na Ikpeazụ Day, na ugboro ugboro akpọkukwa Chineke." (Kor'an 33:21)
Maka Christian ihe ọmụma dị ezigbo mkpa mgbe Islam agbagọkwa Bible. Mgbe anyị na-eso ndị Gospel anyị Muslim ụmụ amaala ibe anyị, anyị kwesịrị ịmata otú ha akọwahie ozi anyị na-agwa. Kraịst na-arụ ụka n'ihi na ihe atụ na Jizọs bụ Ọkpara Chineke. N'ihi na a Muslim, nke a pụtara na Chineke ga-enwewo mmekọahụ na nwaanyị nwere nwa, mgbe ahụ, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe Koran na-akụzi.
"Olee otú a ga n'ezie eluigwe na ụwa nwere ụmụaka, mgbe ahụ, ọ dịghị nwunye?" (Quran 6: 101)
Otu bụ eziokwu nke Atọ n'Ime Otu. Ọ dịghị Christian mgbe ọ bụla n'akụkọ ihe mere eme ma kwere ma ọ bụ kwuru na Trinity ga iso nke Chineke, Jizọs na Mary. Ozizi a na-ekpu site kor'an na-akụziri ndị Alakụba na nke a bụ ihe anyị kweere.
"Ọbụna mgbe Chineke sịrị, Jesus, nwa Meri, mere i ji sị ndị Izrel:" Were m na nne m dị ka chi kama nke Chineke! (Koran 5: 116) ""
Putakarisiri okwukwe Ndị Kraịst bụ Jizọs ọnwụ, mbilite n'ọnwụ na divinity. Islam bụghị nanị na-agọnahụ a nile, ma ọ bụ ndị a na ozizi, anyị na-emekarị nwere iji chebe mgbe Alakụba na-azụ ọgụ ndị a.
"Sị, Anyị na-gburu Christ Jesus, nwa Meri, onye ozi nke Chineke, ma ha abughi gburu ma ọ bụ kpọgide Ya n'obe, ma ha yiri ka ha na otú ahụ, na ndị na-arụ ụka banyere ya, nwere bụ n'ezie na-ejighị n'aka, n'ihi na ha nwere ọ dịghị ihe ọmụma nke ya, ma naanị echiche ime; ha gburu ya na ndụ n'ezie, ma Chineke mere ya, n'ihi na Chineke bụ ike ma mara ihe. (Koran 4: 156) "
Ebe amaghị bụ onye kasị ukwuu
Ná mba ebe amaghị bụ kasị ukwuu, ebe Islam-eto nke ọma kasị mma. Sweden bụ ihe nlereanya magburu onwe nke a. The n'ozuzu amaghi na-eme n'usoro mgbasa ozi, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Muslim nkwusa nwere ike ikwu ihe ọ bụla na ndị mmadụ kwere na ha.
Ihe atụ nke a na-apụghị ịgụta ọnụ ugboro anyị na-anụ onye imam mgbe ọzọ na-egbu egbu eyi ọha egwu na aha Allah ọgụ nwere ihe ọ bụla na-eme na Islam. Anyị na-anụ na ihe atụ, Muhammad bụ a inyom nri fighter ka anyị na West-akwanyere nnwere onwe nke ndị inyom. Ndị a bụ ụgha, ma ndị mmadụ kwere na ya.
Ụmụ okorobịa abụọ ndị isi
Anyị nwere ike Louisa Vester OBODO Jespersen na Maren Ueland atụ, ụmụ nwaanyị abụọ na-brutally isi na ezumike na Morocco. Onye na a ncheta ememe na-azọrọ na ikwa-adịghị na-eme na Islam na ala SVT bụ àmụmà ngwa lash na na. Nke a nwere ihe niile na naanị na-eme na Islam.
Rịba ama na igbu ọchụ bụ a otu mgbalị, nke na-asị a otutu. M gwara ndị enyi m na anyị ga-abịa abụọ njem nleta, brutally halal egbu ha, gbaa ihe niile na biputere na mmadụ mgbasa ozi na ha n'aka ka m kpọchiri. Gịnị di na-egbu ọchụ akwụkwọ? N'ihi na Koran na hadiths!
"Ha ụgwọ, nke na-alụ ọgụ Chineke na Apostle, na instigate ọjọ n'elu ụwa, i naanị na ha na-egbu ma ọ bụ na kpogidere, ma ọ bụ ha aka na ụkwụ gbubiri crosswise, ma ọ bụ na ha ga-chụpụrụ na mba. Nke a ga-ha ihere na ndụ a, na ndụ na-abịa na-echere ha a egwu ntaramahụhụ. "(Quran 5:37)
Ịkwado Ọ KWESỊRỊ
Gịnị nwere ihe abụọ ndị njem nleta na-eme na-edochaghị anya iwe nke "na-alụ ọgụ Chineke na Apostle, na instigate ọjọ n'ụwa"? Louisa na Marens egbu aṅụwo iyi ịkwado Ọ KWESỊRỊ. Ma Norway na Denmark bụ akụkụ nke ụwa na mmekota nke so kpata n'ụzọ dị iche iche mbuso BỤ. Louisa na Maren kwụrụ ụgwọ na-agha megide KWESỊRỊ site ịtụ ụtụ isi ma si otú ahụ ikpe mara nke n'elu nēkpuchi.
Dị ka Muhammad onwe ya ka ọ na-enweta na-akwado ma na-akwadebe ndị agha otu ịkwụ ụgwọ dị ka ndị agha ha. Nke a bụ ihe kpatara nke Allah dị ukwuu dị ka ihe.
"Ọ na-akwadebe a warrior na ihe kpatara nke Allah, ga-enweta ụgwọ ọrụ dị ka ya, na-enweghị na ọ ewetulata na warrior ụgwọ ọrụ na nwetụrụ." (Sunan Ibn Majah 2758)
Mass ili na 34 isi Kraịst
Anyị maara na Islam bụ ekwensu ke beheading Association atụ. Jizọs bụ parish na chọọchị bụ ahu na o doro anya na Setan chọrọ ịmata ọdịiche dị n'etiti ha.
Na atụmanya nke Jizọs laghachiri, Stefan Eliasson
Isiokwu na vidiyo na-mere site ndị ọzọ karịa Apg29.nu nwere echiche na blog saịtị na-anọghị.
Vecka 29, lördag 20 juli 2019 kl. 20:26